Umkhiqizi waseChina weTitanium Alloy Screws, enemibala engu-Titanium Screws, Head Titanium Screws
Incazelo Yomkhiqizo Intengo ethe xaxa iM3 Round Head Titanium Screws Izikulufo zeTitanium zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sazo sokukhanya namandla aphezulu. Banamandla kakhulu kunezikulufo ezibonakalayo ze-aluminium. Kepha umbala wabo awunamabala...
Yenza ngokwezifiso ama-bolts titanium amancane ngokwezifiso I-Titanium Alloy Screw Feriorer ingasetshenziswa yonke indawo. I-Titanium Screw ingasebenzisa entanyeni yesiginci I-Beside enemibala e-Titanium Screws, futhi sinama-Screws Wokuzenzela,...
inkinobho ephezulu ye-titanium head torx cap screws I-Titanium Alloy Screw Feriorer ingasetshenziswa yonke indawo. I-Titanium Screw ingasebenzisa entanyeni yesiginci I-Beside enemibala e-Titanium Screws, futhi sinama-Screws Wokuzenzela,...
Ikhwalithi ephezulu ye-Din 912 hex titanium allen bolt I-Titanium Alloy Screw Feriorer ingasetshenziswa yonke indawo. I-Titanium Screw ingasebenzisa entanyeni yesiginci I-Beside enemibala e-Titanium Screws, futhi sinama-Screws Wokuzenzela,...
Intengo ekhangayo ye-titanium alloy ngesithuthuthu I-Titanium Alloy Screw Feriorer ingasetshenziswa yonke indawo. I-Titanium Screw ingasebenzisa entanyeni yesiginci I-Beside enemibala e-Titanium Screws, futhi sinama-Screws Wokuzenzela, Ama-Standoffs...
DIN7991 M5 M6 M8 titanium countersunk ikhanda isikulufa I-Titanium Alloy Screw Feriorer ingasetshenziswa yonke indawo. I-Titanium Screw ingasebenzisa entanyeni yesiginci I-Beside enemibala e-Titanium Screws, futhi sinama-Screws Wokuzenzela,...
Zonke izinhlobo zohlobo lwekhanda lesigaxa se-titanium Sinezinhlobo zonke zohlobo lwekhanda lesigaxa se-titanium, imibala yemvelo nesiliva. Izikulufo zeTitanium zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sazo sokukhanya namandla aphezulu. Banamandla kakhulu...
I-OEM Titanium Bolt Screw eyenziwe ngokwezifiso eyenziwe ngokuqonda okuphezulu Sinezinhlobo zonke zohlobo lwekhanda lesigaxa se-titanium, imibala yemvelo nesiliva. Izikulufo zeTitanium zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sazo sokukhanya namandla...
I-M3 Titanium Flat Head One Slot Screws Ye-RC Car Ama-Titanium Flat Screws ayizidingo ezibaluleke kakhulu zezimboni empilweni yansuku zonke, njengamakhamera, izibuko zamehlo, amawashi, i-elekthronikhi nokunye. Izikulufa zethu ezijwayelekile zesitoko...
Ifektri Intengo M3 Titanium Hex Socket Screw Sinezinhlobo zonke zohlobo lwekhanda lesigaxa se-titanium, imibala yemvelo nesiliva. Izikulufo zeTitanium zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sazo sokukhanya namandla aphezulu. Banamandla kakhulu...
I-Titanium bolt socket socket yokuhlinzwa enzima kunazo zonke Izikulufo ziyizidingo ezibaluleke kakhulu zezimboni empilweni yansuku zonke, njengamakhamera, izibuko zamehlo, amawashi, i-elekthronikhi nokunye. Izitokwe zethu ezijwayelekile zesitoko...
I-M3 Button Titanium Screw Izikulufo zeTitanium zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sazo sokukhanya namandla aphezulu. Banamandla kakhulu kune-aluminium material screws. Kodwa umbala wazo awunambala njengama-aluminium screws ngenxa yesici sezinto...
I-M3 Button Head Titanium Screws Izikulufo zeTitanium zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sazo sokukhanya namandla aphezulu. Banamandla kakhulu kune-aluminium material screws. Kodwa umbala wazo awunambala njengama-aluminium screws ngenxa yesici...
Amafektri Amanani eTitanium Screw Ngekhwalithi Ephakeme Sinezinhlobo zonke zohlobo lwekhanda lesigaxa se-titanium, imibala yemvelo nesiliva. Izikulufo zeTitanium zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sazo sokukhanya namandla aphezulu. Banamandla...
Izitolo eziShibhile ezenziwe ngokwezifiso zeTitanium ezinekhwalithi ephezulu Izikulufo zeTitanium zaziwa kakhulu ngokuba namandla, zingasindi futhi zingamelana nokugqwala. Isakhiwo esisodwa esivelele uma siqhathaniswa nezinye izikulufo zensimbi...
Izinga eliphakeme le-Titanium Colour Button Screws Ama-Titanium Screws ayizidingo ezibaluleke kakhulu zezimboni empilweni yansuku zonke, njengamakhamera, izibuko zamehlo, amawashi, i-elekthronikhi nokunye. Okwe-Titanium Screws Button Head Titanium...
Ikhwalithi ephezulu neLightweight M3 Titanium Screws Isakhiwo esisodwa esivelele uma siqhathaniswa nezinye izikulufo zensimbi ukuthi izikali ze-titanium zinamandla aphezulu kakhulu kuya kwesisindo ngobukhulu obungu-4.51 g / cm3. Sinezinhlobo zonke...
Intengo enhle kakhulu i-M3 eyenziwe ngezifiso i-Titanium Round Head Screw Sinezinhlobo zonke zohlobo lwekhanda lesigaxa se-titanium, imibala yemvelo nesiliva. Izikulufo zeTitanium zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sazo sokukhanya namandla aphezulu....
I-M3 Socket Titanium Screw Izikulufa zeTitanium zinesisindo esikhanyayo namandla aphezulu. Banamandla kakhulu kune-Aluminium Screw, Titanium Screw, Screwless Steel Screw, iron Screw (s), Nylon Screw Kodwa umbala wazo awunambala njengama-aluminium...
Anodized M4x12 titanium bolts Natural Izinzuzo ze-titanium screws kukhona ukukhanya kwe-ultra, ukukhanya kwe-corrosion, anti-oxidation, i-bio-iyahambelana, ukumelana okushisa aphansi kanye nokushisa okuphezulu, imodulus ephansi ye-elasticity,...
I-Titanium socket ikhanda cap ngezikulufo zomjaho I-Titanium Screw isetshenziswa kabanzi emakethe yomjaho, futhi iya ngokuya ithandwa kakhulu. I-Titanium Fasteners ilula futhi iqinile kune-aluminium nensimbi engagqwali. Ngaphandle Titanium...